အတတ်ပညာ China 20-800mm HDPE Pipe Fittings ပလပ်စတစ် Electrofusion ဂဟေဆော်စက် 2700W CE ခွင့်ပြုချက် ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် စက်ရုံ |CHUANGRONG
1. မော်ဒယ်- ZDRJ800
2. အလုပ်အကွာအဝေး: 20-800mm
3. Memory: အစီရင်ခံစာ 4000
4. ဂဟေဆော်ထုတ်ဗို့အား: 8-48V
ပိုက် Fittings Electrofusion
အခမဲ့အပိုပစ္စည်း၊ ကွင်းဆင်းတပ်ဆင်ခြင်း၊ ကော်မရှင်ပေးခြင်းနှင့် လေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်း၊ ကွင်းပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် ပြုပြင်ခြင်းဝန်ဆောင်မှု၊ အွန်လိုင်းပံ့ပိုးမှု၊ ဗီဒီယိုနည်းပညာပံ့ပိုးမှု
ZDRJဘက်စုံသုံး Electrofusion စက် (ဗို့အားနိမ့် 8¸48V) သည် ဈေးကွက်တွင်ရရှိနိုင်သည့် Coupler အမှတ်တံဆိပ် 400 mm အထိ၊ ဗားရှင်း 400 အတွက် 400mm အထိ နှင့် ဗားရှင်းအတွက် 800mm အထိ ပေါင်းစပ်ပေးနိုင်သည်။စက်သည် Optical Pen ဖတ်ရှုခြင်း သို့မဟုတ် တွဲချိတ်များတွင် မြင်နိုင်သော ဘားကုဒ်ကို ကိုယ်တိုင်မိတ်ဆက်ခြင်းဖြင့် မှန်ကန်သော ပေါင်းစပ်ဘောင်များကို အလိုအလျောက် သတ်မှတ်ပေးသည် (ISO13950)။Coupler များသည် ဘားကုဒ်မပြပါက၊ ထုတ်လုပ်သူမှ အကြံပြုထားသော Tension နှင့် Fusion Time ကို ကိုယ်တိုင်မိတ်ဆက်နိုင်သည်။ZDRJပေါင်းစည်းမှုဘောင်များ သိမ်းဆည်းရန်အတွက် အတွင်းမှတ်ဉာဏ်တစ်ခု ပါရှိသည်။Fusion Data ကို print ထုတ်ပြီး PC တွင် ဒေါင်းလုဒ်လုပ်နိုင်သည်။
1. ဘားကုဒ်ဖတ်ခြင်းဖြင့်/ ဘားကုဒ်၏လက်စွဲမိတ်ဆက်ခြင်းဖြင့်/ တင်းမာမှုနှင့် ပေါင်းစပ်ချိန်ကို လက်ဖြင့်မိတ်ဆက်ခြင်း
2. စမတ်စကင်န်သေနတ်ကို ပြည်တွင်းပြည်ပရှိ ပိုက်စက်ရုံအများစု၏ ဘားကုဒ်များကို ဖော်ထုတ်ရန် အသုံးပြုနိုင်သည်။
3. ဂဟေဆက် 4000 ဖြင့် မမ်မိုရီကို တည်ဆောက်ပါ၊ ဒေတာကို လက်ပ်တော့သို့ usb ဖြင့် ဒေါင်းလုဒ်လုပ်နိုင်သည် သို့မဟုတ် အလုပ်ဆိုဒ်တွင် ပရင့်ထုတ်နိုင်သည်။
4. ပတ်ဝန်းကျင် အပူချိန်အရ အလိုအလျောက် အပူချိန် လျော်ကြေးပေးခြင်း
5. Universal connector 4-4.7mm၊ connector ကောင်းသည်ဖြစ်စေ ဂဟေဆက်ခြင်း၏အရည်အသွေးနှင့် တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်သည်ဖြစ်စေ အချိန်မီအစားထိုးရမည်၊
6. Intelligent ဒီဇိုင်း၊ စက်ပျက်သွားသောအခါ၊ (ထောက်ပံ့ရေးဗို့အား၊ အထွက်လက်ရှိ၊ ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်ကဲ့သို့) ဗို့အား သို့မဟုတ် ဗို့အားလွန်နေခြင်းသည် အရည်ပျော်ခြင်း သို့မဟုတ် အလွန်အရည်ပျော်ခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်
Electrofusion Machine Standard ဖွဲ့စည်းမှု
5. 4.7*4.0 ချိတ်ဆက်ကိရိယာများ
* တပ်ဆင်မှုဘောင်အလိုက် အလုပ်အကွာအဝေး ကွဲပြားနိုင်သည်။ပါဝါနှင့် ဂဟေဆော်ချိန် လိုအပ်သော တပ်ဆင်ထုတ်လုပ်သူနှင့် စစ်ဆေးပါ။
* 60% Duty Cycle တွင်ပါဝါ။
အဆစ်များ၏ အရည်အသွေးသည် ဂရုတစိုက်လိုက်နာရမည့် အောက်ပါ ညွှန်ကြားချက်များပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။
ပိုက်များနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ကိုင်တွယ်ခြင်း။
ပေါင်းစပ်သည့်အခါ၊ ပိုက်များနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၏ အပူချိန်သည် စက်၏စုံစမ်းစစ်ဆေးမှတိုင်းတာသည့် ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်နှင့် ဆင်တူနေရပါမည်။
ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့သည် ပြင်းထန်သောလေ သို့မဟုတ် နေရောင်ခြည်တိုက်ရိုက်မထိတွေ့နိုင်ပါ။ ၎င်းတို့၏ အပူချိန်သည် ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်မှ တသမတ်တည်း ကွဲပြားနိုင်ပြီး၊ ပေါင်းစပ်မှုကို ထိခိုက်စေသည် (ပိုက်နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ မလုံလောက်ခြင်း သို့မဟုတ် အလွန်အကျွံ ပေါင်းစပ်မှု) ကို ထိခိုက်နိုင်သည်။အပူချိန်မြင့်မားပါက ပိုက်နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို နေရောင်တိုက်ရိုက်နှင့် ဝေးဝေးတွင်ထားကာ ၎င်းတို့၏ အပူချိန်သည် ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်နှင့် ဆင်တူသည်အထိ စောင့်ပါ။
အထူးပိုက်ဖြတ်စက်များကိုအသုံးပြု၍ ပိုက်၏အနားများကို ဖြောင့်တန်းစွာဖြတ်ပါ။ပိုက်များနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ကွေးညွှတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ပုံရိပ်ယောင်ခြင်းများကို ဖယ်ရှားရန် ဂရုတစိုက်ကြိုးစားပါ။
အထူးပိုက်ခြစ်စက်များဖြင့် ပိုက်များ သို့မဟုတ် အံဝင်ခွင်ကျအစွန်းများပေါ်တွင် oxidized အလွှာများကို ဂရုတစိုက် ခြစ်ပါ။ခြစ်မိကြောင်း သေချာပါစေ။ယူနီဖောင်းနဲ့ ပြည့်စုံတယ်။1 စင်တီမီတာခန့်ရှိသောလျောက်ပတ်မှု၏အလယ်ထက်ကျော်လွန်ပေါင်းစပ်ရန်မျက်နှာပြင်များပေါ်တွင်;ဤလုပ်ဆောင်ချက်မျိုးမရှိခြင်းသည် အစိတ်အပိုင်းများ၏ မော်လီကျူးဝင်ရောက်မှုအား တားဆီးကာ ပေါင်းစပ်မှုရလဒ်ကို ထိခိုက်စေသောကြောင့် အပေါ်ယံပေါင်းစပ်မှုကိုသာ ဖြစ်စေသည်။သဲစက္ကူ၊ emery wheel ကဲ့သို့သော ခြစ်ထုတ်နည်းများရှောင်ကြဉ်ရမည်။.
၎င်း၏အကာအကွယ်ထုပ်ပိုးမှုမှ Coupler ကိုထုတ်ပါ၊ ထုတ်လုပ်သူ၏ညွှန်ကြားချက်အရအတွင်းပိုင်းကိုသန့်ရှင်းပါ။
Coupler ထဲသို့ ပိုက်၏ အစွန်းများကို ထည့်ပါ။
အောက်ပါအတွက် aligner ကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်ပါသည်။
- ပေါင်းစပ်ခြင်းနှင့် အအေးခံသည့်အဆင့်တွင် အစိတ်အပိုင်းများကို တည်ငြိမ်အောင်ပြုလုပ်ပါ။
- ပေါင်းစပ်စက်ဝန်းနှင့် အအေးခံချိန်အတွင်း အဆစ်ပေါ်ရှိ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖိစီးမှုမျိုးကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။
Fusion area သည် စိုထိုင်းဆ၊ အပူချိန် -10°C သို့မဟုတ် +40°C အထက်၊ ပြင်းထန်သောလေ၊ နေရောင်ခြည်ကဲ့သို့သော ပြင်းထန်သောရာသီဥတုအခြေအနေများမှ ကာကွယ်သင့်သည်။
အသုံးပြုထားသော ပိုက်များနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများသည် တူညီသောပစ္စည်း သို့မဟုတ် လိုက်ဖက်သောပစ္စည်းဖြစ်ရပါမည်။ပစ္စည်းများကြား လိုက်ဖက်ညီမှုရှိရန် အာမခံချက်ရှိရမည်။
အအေးခံချိန်သည် Coupler ၏ အချင်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် အပူချိန်ပေါ်တွင် မူတည်သည်။Couplers များအသုံးပြုသည့်ထုတ်လုပ်သူမှပေးသောအချိန်များကိုလိုက်နာရန်အရေးကြီးပါသည်။
အဆစ်များ (ကွေးခြင်း၊ ဆွဲငင်ခြင်း၊ လိမ်ခြင်း) တွင် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖိစီးမှုကို ရှောင်ရှားရန် အဆစ်များ လုံးဝ အေးသွားသည့်အခါတွင် ကြိုးများနှင့် ချိန်ညှိမှုများကို ဖြုတ်ပါ။
ပေါင်းစည်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်မစမီ သင်သည် စက်၏ဘားကုဒ်ဖတ်ခြင်းကို အသုံးပြုလိုခြင်းရှိမရှိ ဆုံးဖြတ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
ပေါင်းစပ်မှု ပြီးမြောက်အောင် ခြေရာခံနိုင်စေရန်အတွက် ပိုက်/ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၏ စနစ်။Fusion data ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
စက်၏မှတ်ဉာဏ်တွင် သိမ်းဆည်းထားပြီး ပုံနှိပ် သို့မဟုတ် ဒေါင်းလုဒ်လုပ်နိုင်သည်။
ပင်မမီနူးသို့ ရောက်သည်အထိ ရွှေ့ပါ။
ခလုတ်များကိုနှိပ်ပါ။Cခြေရာခံနိုင်မှုကို အသက်သွင်းရန် သို့မဟုတ် ပိတ်ရန် (× Ø)။
စာနယ်ဇင်းသွင်းပါ။ဆက်တင်များကို သိမ်းဆည်းရန် မီနူးသို့ ပြန်သွားပါ။
ယခင်- အစိမ်းရောင်/အဖြူ/အပြာ/လိမ္မော်ရောင်ဖြင့် သောက်သုံးနိုင်သောရေအတွက် PEX ပိုက်နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
နောက်တစ်ခု: Pipe Extrusion Line Pe Hot Plastic Extrusion Welding Gun Plastic Fabrication
Hdpe Butt ဂဟေဆော်စက်
Hdpe ပိုက် Fusion ဂဟေဆော်စက်
160 Portable Elektra Hdpe ပိုက် Electrofusion ကျွန်ုပ်တို့...
HDPE ပလပ်စတစ်ပိုက် Fitting Electrofusion Weldin...
Gas အတွက် 400/630 ဂဟေဆော်စက်
အရွယ်အစား 32mm မှ 315mm အတွင်း လျှပ်စစ် Fusion Welder Fo...
OD1000mm 15KW Electrofusion ဂဟေဆော်စက် ကျွန်ုပ်တို့...
315 ပိုက် လျှပ်စစ်ဂဟေဆော်စက် ၊ HDPE ပိုက်...